Del Piero oo kaga digay Juventus awooda ciyaareed ee LABA kooxood xili ciyaareedka cusub 2019/20 – Gool FM
Del Piero oo kaga digay Juventus awooda ciyaareed ee LABA kooxood xili ciyaareedka cusub 2019/20
(Turin) 24 Agoosto 2019. Halyeeyga kooxda kubadda cagta ee Juventus Alessandro Del Piero ayaa uga digay kooxdiisii ​​hore ee Bianconeri. awooda ciyaareed ee labada naadi Atlanta iyo AS Roma xilli ciyaareedka cusub ee 2019/2020.
Alessandro Del Piero ayaa sheegay in labada kooxood ee Atlanta iyo AS Roma inay heystaan awooda ay kula dagaalami karaan Juventus ku guuleysig horyaalka Serie A ee dalka Talyaniga.
Dhinaca kale Del Piero ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in waxyaabo badan ay isbadeleen inta lagu gudi jiray suuqan xagaaga, balse wuxuu si gaar ah uga digay labada kooxood ee Atlanta iyo AS Roma, wuxuuna sheegay inay u tartami doonaan ku guuleysiga horyaalka, si la mid ah kooxaha Napoli iyo Inter Milan.
Wargeyska “CalcioMercato” ee dalka Talyaaniga ayaa daabacay wareysi uu dhawaantan bixiyay halyeeyga kubadda cagta dalka Talyaaniga ee Del Piero wuxuuna yiri:
“Horumar aan caadi aheyn ayaa ka jira horyaalka Serie A, xaqiiqdii waan soo dhaweyneynaa, waxaa jirta geesinimo xoogan ee ku jirta kooxaha qaar, sida Atlanta xili ciyaareedkii lasoo dhaafay”.
“Tartan aan caadi ahayn ayaa ina sugaya, isla markaana aan aad ugu riyaaqi doono, sababtoo ah tartanka wuxuu ka xoogan sida uu ahaa sanadihii lasoo dhaafay, Juventus-na aad ayey u xoogan tahay laakiin waanu arki doonaa waxa dhaca maxaa yeelay kooxdu waxaa lagu arkay isbadallo badan, laga bilaabo macalinka”.
“Sidoo kale wax badan ayaan ka rajeenayaa kooxaha Inter Milan iyo Napoli, laakiin waa inaad ka taxaddartaa Atlanta iyo AS Roma”.
Si kastaba ha noqotee, kooxda kubadda cagta Juventus ayaa kulankeeda ugu horreeya ee horyaalka Serie A xilli ciyaareedkan 2019-20 waxa ay u safreysaa caawa naadiga Parma.
Sagaalka saxiix ee dhici kara maalmaha suuqa ka harsan… (Xiddigee ayey ku leedahay Kooxadaada?)
Shaxda rasmiga ah kooxaha Parma vs Juventus ee kulanka horyaalka Serie A